Nandrolone Undecanoate powder Mpanamboatra sy mpamatsy - Factory
Ny nendronone tsy dezencat dia anabolisy malaza anabolika izay mamokatra kalitao, ny fahazoana maharitra ny hozatra. Izy io koa dia fanampiana amin'ny fihenam-bidy mba hanampiana anao handratra mavesatra mora kokoa amin'ny fampihenana ny habetsahan'ny tavin-koditra.
Rano Nandrolone tsy dekoanoate vovoka (862-89-5) video
Rano Nandrolone tsy misy pneomaate (862-89-5) Description
Ny vovo-dronono tsy an-kira tsy tandindomin-doza, antsoina hoe Dynabolon, dia mazava ho azy fa tsy natao ho an'ny fampidirana am-bava. Ny vovo-dronono tsyandrolone Nandrolone dia endriny iray amin'ny endrika anabolic steroide, toy ny Nandrolone Decanoate (Deca-Durabolin) Ny tombony midadasika amin'ny tanjaka sy ny 'kalitao avo' dia betsaka (ny tazo mena izay mety hijanona amin'ny fampiasana post-drug). Io fanafody io dia ny anabolic steroid. Ny ety ampiharina eto dia atoma-karbôna iray lava kokoa noho ny decanoate, ka noho izany dia mametraka fitsinjovana fitsaboana kely maharitra mandritra ny fitsaboana. Ny nandrolone undecylate dia singa mahomby izay miteraka kalitao, mahomby maharitra maharitra. Izany dia noho ny halavan'ny vanim-potoana lavitry ny zava-mahadomelina (manodidina ny 18 andro). Na dia tsy misy varavarankelin'ny lozam-pifamoivoizana hafa aza, ny vovobony Rindran-dranomamy Nandrolone dia mety hampidirina am-pifaliana indray mandeha isaky ny 1 hatramin'ny herinandro 2, izay maneho ny toetrany miadana. Ny atleta sy ny bakteria dia tena nankasitrahana indrindra noho ny fahaizany mampiroborobo ny fihazakazakazakazaka marefo amin'ny volo marefo miaraka amin'ny voka-dratsiny amin'ny endriny ivelany sy ny androgenika.
Rano Nandrolone tsy dekoanoate (862-89-5) Specifications
Product Name Rano Nandrolone tsy dekoanoate
Anarana simika Nandrolone undecylate; 862-89-5; Dynabolon; Rano Nandrolone tsy dekoanoate
molekiolan'ny Wvalo 442.684 g / mol
mitsonika Point 53.2 ~ 54.5 ℃
vayma- Point 548.5 ° C amin'ny 760 mmHg
Application Ny vovo-dronono tsyandrolone roindefo dia ampiasaina mba hampiroboroboana ny fahavoazana aorian'ny fandidiana be loatra, ny aretina mitaiza, ny aretina mafy, ary amin'ny toe-javatra hafa izay mitarika tsy fahampian'ny fahazoana na ny fikojakojana. Ny vovo-dronono tsy an-kijanona roapolo dia ampiasaina ihany koa mba hampihenana ny fahaverezan'ny muscle vokatry ny fitsaboana amin'ny corticosteroids ary hampihenana ny fanaintainan'ny taolana izay mifandray amin'ny osteoporose.
Inona no atao hoe vovo-dronono tsy an-kira Nandrolone (862-89-5)?
Ny nendrikendrina tsyandrolone dia ejipsiana malaza anabolika izay ahitana ny hormone Nandrolone hormonina mifindrafindra toerana izay mifamatotra amin'ny Estera goavam-be lehibe. Tena mitovy amin'ny Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin), Eterônatika tsy manam-pahaizana Nandrolone dia somary lehibe kokoa manome varavarankely maharitra maharitra kokoa.
Io fampitambarana manokana nandrolone undecanoate io dia mitovy amin'ny ampiasain'ny Organon amin'ny fanomanana testosterone Andriol. Eto ny fitambarana dia mazava ho azy fa tsy natao ho an'ny fitantanana ny orana, na izany aza fa ny famolavolana dia toy ny lavitr'asa, solika mioroka be injectable.
Ahoana ny fomba famonoana ny vovo-dronon'ny tsy dekoanoate (862-89-5) asa
Ny Nandrolone Undecanoate (Dynabolon) dia voadonan'ny Nandrolonein izay ampiarahina amin'ny karbôkôlika (asidaky iononanoika) amin'ny 17-beta hydroxyl group. Ny steroïde esterified dia manana fihenana kely kokoa noho ny steroids maimaim-poana ary mihamitombo tsimoramora kokoa eo amin'ny tranonkala fitsaboana. Indray mandeha amin'ny ra, ny ester dia nesorina mba hamokarana haavo (mavitrika) maimaim-poana. Ny steroide esterified dia natao hanitarana ny varavarankely ara-pahasalamana aorian 'ny fampiharana, izay mamela ny fampidiran-drà tsy ampiasaina matetika noho ny steroids (tsy misy fanantenana). Ny poizina Nandrolone Undecanoate (Dynabolon) dia natao hamotsorana Nandrolone tsikelikely ao anatin'ny 3 hatramin'ny herinandro 4 herinandro.
Rano Nandrolone tsy misy pentina (862-89-5) Dosage
Ny Nandrolone Undecanoate dia fiaraha-miasa mahomby izay miteraka kalitao, ny fahazoana maharitra ny hozatra. Izany dia noho ny halavan'ny vanim-potoana lavitry ny zava-mahadomelina (manodidina ny 8 andro). Ny dosage mahazatra indrindra dia ny 3-4 ampules (241.5 hatramin'ny 322mg) isan-kerinandro, ny haavony izay tokony hahazoana tombony azo tsapain-tànana vaovao ho an'ny muscle vaovao. Ampy tsara ny mitondra 40-70mg avy amin'ny Nandrolone undecanoate voly isan'andro ao an-tsekoly. Noho izany dia mila mitaingin-tsoavaly isan-kerinandro ianao. Mba hampitomboana ny fahombiazan'ny steroid, ny ankamaroan'ny mpanao bakteria dia hizara ny fampidirana amin'ny 2 kely mitovy lanja isan-tsokajiny isan-kerinandro. Ity asa ity dia hampihena ny volavolan-dalàna. Azonao atao ny mampitombo ny dosage raha toa ka manaiky 300-400mg tsy misy olana. Na dia tsy ilaina loatra aza ny dosage, mila mahafantatra isika fa ny ankamaroan'ny lehilahy dia hanohana ny 60mg isan-kerinandro nefa tsy misy olana lehibe. Ampy tsara ny mifikitra amin'ny 400mg. Azo inoana kokoa fa mahatsapa ny fiantraikany ratsy eo amin'ny fampitomboanao ny dosage. Amin'ny toe-javatra sasany, dia mety hisy fiantraikany tsara ny vokatra ratsy, na dia mety tsy mitovy amin'ny olona iray aza izany.
Rano Nandrolone tsy dekoanoate (862-89-5) soa
Ny vovo-dronono tsy an-kira Nandrolone dia malaza amin'ny steroid anabolika izay mamokatra kalitao, ny fahazoana maharitra ny hozatra. Ny nandrendrendan'ny tsy tandindomin-doza / Dynabolon dia steroid tena tsara ho an'ny fanatsarana ny vanim-potoana manerantany ary ny fampivoarana ara-panatanjahan-tena ankapobeny, ny olona dia afaka mahazo tombontsoa mitovy amin'ny Dynabolon amin'ny endrika nandrolone hafa. Ny fampiofanana dia manasitrana ny tazomoka, saingy ny fanasitranana no mahatonga azy io ho matanjaka kokoa ary inona no mahatonga azy hitombo. Na inona na inona antony ampiasainao, ny vokatry ny Nandrolone Undecanoate vovoka / Dynabolon amin'ny fiaretana sy ny fahasitranana ny muscular dia ho faly amin'ny rehetra izay manampy amin'ny steroid anabolic.
Buy Nandrolone andecylate powder from Buyaas.com